Andaniana 300 000 Ar ny fampidirana zaza iray | NewsMada
Manomboka ny fandraisana fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana vaovao 2016-2017 amin’izao fotoana izao, ho an’ny sekoly tsy miankina. Natokana ho an’ireo mpianatra vaovao nanao fifaninanana hidirana amin’ny kilasy izany, fa ireo tsy niova sekoly efa nosantarina ny volana jolay ny famandrihan-toerana. Ho an’ireo ray aman-dreny izay tsy nahatafiditra ny zanany teny amin’ny sekolim-panjakana ho an’ny kilasy 6ème sy 2nde, tsy maintsy mikatsaka vola hianarana amin’ny toeram-pianarana tsy miankina.
Niakatra avokoa ny saran’ny fampidirana mpianatra ho an’ity taom-pianarana vaovao ity, araka ny fanadihadiana. Nitombo 25 ka hatramin’ny 50% ny frais généraux, toy izay koa ny saram-pianarana. « Manaraka ny fiakaran’ny vidim-piainana ny saram-pianarana sy ny vola takian’ny sekoly satria mitombo vidy avokoa ankehitriny ny kojakoja ampiasain’ny sekoly isaky ny kilasy », hoy ny tomponandraikitra iray amin’ny sekoly tsy miankina.
Manodidina ny 300 000 Ar ny vola homanin’ny ray aman-dreny ho an’ny mpianatra iray hampidirana azy any am-pianarana sy hividianana ny fitaovana rehetra. Tsy mbola tafiditra ao ny vidin’ny boky ilaina. Raha vaovao ny boky, 20 000 Ar ka hatramin’ny 30 000 Ar ny vidiny eny amin’ny toeram-pivarotana manokana. Misy ny mpianatra tranainy mampanofa ny bokiny.
Misy amin’ireo sekoly, any amin’ny banky no aloa ny frais généraux sy ny assurance. Mandany andro iray manontolo ny ray aman-dreny milahatra manefa izany, tsy vitsy koa ny tsy mahay mameno ny taratasy mifandraika amin’izay ka very fotoana be. Tsy mora tokoa ny fampianaran-janaka !